Cusbooneysiinta WordPress otomaatiga ah > Vielhuber David
Cusbooneysiinta WordPress otomaatiga ah09
WordPress wuxuu si asaasi ah u hirgeliyey cusbooneysiinta asalka illaa nooca 3.7 oo si toos ah ayuu ugu hawlgeliyaa sii deynta yar yar. Caawinta miirayaasha, waad xakamayn kartaa habdhaqanka si hufan, waxa si toos ah loo cusbooneysiiyo. Rakibid joogto ah, rakibo buuxda oo otomaatig ah oo dhan yar, weyn, koronto, mawduuc iyo cusboonaysiinta tarjumaadda looma jeedin, laakiin si fudud ayaa loo samayn karaa haddii kale.
Waxaa jira waxyaabo badan oo fiilooyin ah oo kordhiya inta jeer ee ogeysiisyada loogu yeero iyo, xaaladaha qaarkood, sidoo kale waxay ballanqaadayaan inay fuliyaan cusbooneysiinta dhabta ah; Laakiin midkoodna sheygan kumuu guuleysan si la isku halleyn karo. Qalabka xariiqda amarka ee awoodda badan WP-CLI wuxuu bixiyaa xal aad u habboon (kaliya maahan ujeedkan). Ka dib rakibid gaaban , khadadka soo socda (oo lagu fuliyay galka mashruuca WP) waxay hubinayaan in dhammaan cusbooneysiinta qaybaha kor ku xusan la rakibay iyada oo aan laga reebin:
Oneliner soo socda (oo loo gaabin karaa via ah alias ama qalab sida qeyrul ) in la ordi karaan on server Ssh kasta (xitaa aan WP-CLI hore lagu rakibay) si ay u rakibi dhan updates waxaa ka mid ah go:
Calanka -allow-root wuxuu hubiyaa in nidaamyadu u shaqeyn karaan sidii isticmaale xidid ah (tani waa lagama maarmaan jawiga WSL ). Cusboonaysiinta qayb kasta oo ka mid ah iyada oo aan hore loo tijaabin jawiga horumarinta deegaanka laguma talinayo xaalad kasta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay deegaan WP gaashaan ah ama kiis adeegsi gaar ah oo had iyo jeer lagugu soo bandhigo cusbooneysiinta ugu dambeysay, wax walba oo dhan ayaa sidoo kale lagu otomatikayn karaa iyada oo loo marayo shaqo fudud oo fudud oo ah qaab feyl ah:
WP-CLI wax badan ayey qaban kartaa: ku dar doorarka isticmaalaha, tirtirto faallooyinka, raadinta iyo bedelida xargaha keydka macluumaadka, soo dejinta feylasha warbaahinta ... waxaa habboon in la fiiriyo dukumiintiyada . Waqtigan xaadirka ah waxaan furay laba arrimood oo Github ah oo quseeya cilladaha yaryar ee ku jira qaybta luqadda , laakiin ha u istaagin habka loo adeegsado deegaanno wax soo saar leh.